Gallan oo loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Bari maalin gobolku dhadhamiyay kharaarka aanaysiga qabiil. – Radio Daljir
Garowe, July 29 – Madaxwaynaha dawladda Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa shalay (Khamiis) guddoomiye cusub u magacaabay gobolka Bari, xilli gobolkaas ay ka taagan yihiin xaalado ammaan oo salka ku haya kuwo dhaqan.
Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxwaynaha ayaa Cabdisamad Maxamad Gallan loogu magacaabay guddoomiyaha gobolka. Horay ayaa waxa xilkan isaga casilay Cabdilxaafid Cali Yusuf.
Magacoowga guddoomiyaha ayaa ku soo beegmay xilli xilli xasaasi ah kadib markii shalay tuulada Kob-dhexaad ee gobolka Bari ay ka dheceen jid-gooyo lagu laayay dad badan qaar kalena lagu dhaawacay. Weerarkaas oo lagu sababeeyay aano qabiil ayaa waxaa ku dhintay todoba qof halka labaataneeyo kalena ay ku dhaawacmeen.
Guddoomiye Gallan maaha shakhsiyad horay loogu yaqaanay masraxa siyaasadeed ee Puntland, waana nin ka soo jeeda bulshada ganacsatada. Si kastaba haahaatee, waxa horyaalla waajibaad ammaan oo aad culus, kuwaasi oo ay ugu wayn yihiin xallinta colaadaha labada ardaa ee ay colaaddoodu jiitantay, iyo waliba sugidda ammaanka gobolka ugu ballaaran Puntland dhaqaala ahaanna ugu wax-soo-saarka badan.